Burmese taste - Iora: အမြန်ချက်အုန်းထမင်း နဲ့ လိုက်ဖက်ဟင်းများ
ကြက်သားဟင်း၊ သခွားသီးသုပ်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို၊ အုန်းထမင်း
အိုးလိုက်နော်။ မလောက်မှာမပူနဲ့ 
ဒီမှာက ရယ်ဒီမိတ်တွေပေါတော့ နဲနဲအချိန်ရပြီး စိတ်ပါရင် ချက်ရတာလွယ်ပါတယ်။ အုန်းနုို့ ကုို ဆီပြန်အောင်ချက်ပြီးမှ ရုိုက်စ်ကွတ်ကာ ထဲ ထဲ့ပြီးချက်လိုက်တာပါ။ အုန်းနို့ က ဘူးဆုိုတော့ အဲလို ချက်လိုက်မှ မွှေးပါတယ်။ ဆန် ၅ဘူး၊ (ရုိုက်စ်ကွတ်ကာဘူး) ကုို အုန်းနုို့ တဘူး၊ သကြား နှစ်သက်သလောက် (ကျမကသိပ်ချိုသွားမှာကြောက်လို့ ဆပြီး ထဲ့တာ နဲနဲပေါ့သွားတယ်။) ဆားနဲနဲ၊ ကြက်သွန်နီ စိပ်ထဲ့ ပြီး တည်နေကျအတုိုင်းရေထဲ့ ပြီးတည်လိုက်တာပါဘဲ။ ဘာမှမပင်ပန်းဘဲ ကျက်သွားတာပါ။ ပွက်တဲ့အချိန်မှာ မွှေပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ မမွှေဖြစ်လဲ သိပ်တော့မထူးပါဘူး။
အအီပြေအောင် သခွားသီးကို အရသာခပ်ပြင်းပြင်း ခြစ်ပြီးသုပ်ပါတယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ နှမ်း၊ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းထဲ့၊ ကြက်သွန်စိမ်း၊ ငံပြာရည်၊ သံပုရာသီးများများညှစ်၊ ပင်စိမ်းရွက် ( ရေခဲရုိုက်) လေးဖြတ်ထဲ့။ ကြက်သွန်ဖြူနီကြော်ဖတ်လေးထဲ့ ဆီမပါဘဲသုပ်ပါတယ်။ အုန်းထမင်းနဲ့ အရမ်းလိုက်ပါတယ်။
အုန်းထမင်း (တကယ်တော့ဒီလို ပြင်တာထက် ဖွဖွလေးခူးတာက ထမင်းပိုလှပါတယ်။)
ငံပြာရည်ချက်နဲ့ ( ငါးခြောက်နဲ့ ဘာလချောင်ကြော်မကြော်ခင်)
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေကသူငယ်ချင်း အမေနဲ့ သူငယ်ချင်းလာမလားဆုိုပြီး အများကြီးချက်ထားတာ။ ပြီးတော့ အမေရိကန်သူငယ်ချင်း၂ယောက်ကိုလည်း ပေးမလားဆုိုပြီး တော့ပေါ့။ သူတုို့ ကလည်း ဒင်နာရှိလို့ ၊ သူငယ်ချင်းကလည်းမလာဖြစ်လို့ တပါတ်လုံးကြိတ်နေရတယ်။ အုန်းထမင်း၊ဟင်းချို နဲ့ အသုပ်ကလွဲရင် ဟင်း တွေကကျန်သေးတယ်။ ကုန်အောင်မဖြိုနုိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
၀က်သားကြော် နဲ့ တွဲစားလည်းကောင်းတယ်လေ။
အချိုပွဲ မက်စီကန် ဗားရှင်း ပူတင်း သုို့ မဟုတ် ဖလန်း
ဒါကမနေ့ ကမှ အချိုကြိုက်တဲ့သူ့ အတွက်လုပ်ပေးထားတာပါ။ ကျမလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပူတင်းသဘောမျိုးပေမဲ့ မက်စီကန် Dessert ပါ။ ခဏခဏလုပ်ဘုို့ စိတ်ကူးပေမဲ့ မနေ့ ကမှလုပ်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သွားလို့ သိပ်သဘောကျနေပါတယ်။ လုပ်နည်းတွေ ကတော့ အွန်လိုင်းမှာ အများကြီးပါ။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ တင်ပေးပါမယ်။
လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အရည်မရအဖတ်မရလေးတွေ နဲ့ ဘဲ ကျေနပ်ပါစေလို့ ..
Posted by Iora at 4:20 AM
khin oo may November 4, 2011 at 4:45 AM
4 Nov 11, 04:45 AM
kom: ချဉ်ပေါင်ဟင်းထဲခရမ်းချဉ်သီးထဘ့်ထညူတာလညး နိနီလေးက ဘာလဲ။
4 Nov 11, 04:44 AM
kom: ဝက်သားကြော်ဘေးမှ အသီးတလုံးပါသေးတယ်လေ. ဘာလဲ။
makyarnyo: ချစ်ကြည်လေးစားရပါသောချစ်ညီမလေးးးရေ..အရည်လဲရ..အဖတ်လဲရ..အချိုလဲရာာအချဉ်လဲရ..အစပ်လဲရ..အငံလဲရ..မျက်စေ့အဟာရလဲရ..စိတ်အဟာရလဲရ...ပြိးပြည့်စုံပြည့်ဝစေတဲ့...Taste လေးပါ...မှန်တာပြောသစ္စာပါချစ်ညီမIORA:):);)
kom: မစားရလို့ပိုစိတ်ဆိုးတယ် ဝါး.
4 Nov 11, 04:42 AM
kom: ပင်စိမ်းရွက် ( ရေခဲရုိုက်) ဆိုတာဘာရဲ
4 Nov 11, 04:41 AM
4 Nov 11, 04:40 AM
kom: အုန်းနို့တစ်ဘူးကဘယ်လောကစီစီလဲ ဟင်း .
kom: ဆန် ၅ဘူး၊ (ရုိုက်စ်ကွတ်ကာဘူး) .သိတ်တိကျတာဘဲနော် တို့လာဖတ်မယ်ဆိုတာသိလို့လား မဟုတ်ရင်တနို့ဆီဘူးနဲ့ချိန်ပလိုက်မှာ.
4 Nov 11, 04:39 AM
khin oo may November 4, 2011 at 4:46 AM
rose November 4, 2011 at 5:20 AM
sis Iora, I'm very hungry now. Want to eat coconut rice, chicken curry. Please share the pudding recipe if you have time :)))
မြတ်ကြည် November 4, 2011 at 5:40 AM
မမ ပူတင်းလုပ်နည်းတင်ပေးပါဦး။ ညီမလုပ်ရင် အဲလို ဘယ်အခါမှ မထွက်ဘူး။
KhinU Khine November 4, 2011 at 7:54 AM
မိုးငွေ့...... November 4, 2011 at 8:46 AM
အယ်...မကွန်က ဟင်းချက်မယ်ဆိုပဲ.....။ အုန်းထမင်းတောင်မချက်စားဖြစ်တာကြာပြီ...။ သခွားသီးလေးသုပ်ထားတာ သိပ်လှတာပဲ စားချင်စရာလေး...။ အကုန်လုံးကောင်းတယ်...။
ဘေဘီ November 4, 2011 at 12:33 PM
စားချင်တယ် လာပို့ပေးး)
ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း တနင်္လာနေ့က ပဲထမင်းချက်ပြီး
အဲ့လိုလေး ဟင်းတွေပုံထည့်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတယ်
Iora November 4, 2011 at 3:15 PM
ပထမဆုံးဆုိုတော့ ဆုချချင်နေပြီ။း)
၁. စားချင်ရင် စားပါဝေး..
၂. ချဉ်ပေါင်ဟင်းထဲက နီနီလေးက ခရမ်းချဉ်သီးဖတ်ပါ။
၃. ၀က်သားကြော်ဘေးက ဆားတုို့ ငရုတ်ကောင်းတို့ ထဲ့တဲ့ ကြွေဖရုံသီးပုံ လေးပါ။
၄. မစားရလို့ တော့စိတ်မဆုိုးပါနဲ့ ။ တနေရာထဲမှာ ဆုို ခေါ်ခေါ်ကြွေးနေမှာ။ တော်ကြာမှ ခေါ်မှာကြောက်ပြီး ဖုန်းတောင်ထူးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။း)
၅. ပင်စိမ်းက မြန်မာပင်စိမ်းက အမြဲမရဘူးလေ။ တခါတလေ farmers' market သွားမှရတတ်တော့ တွေ့ တဲ့အချိန်ဝယ်ထားတာလေးကို ကြာကြာခံအောင် တခါတည်း သန့် စင်ပြီး ziploc အိတ်ထဲထဲ့ထားပြီး ဖရီဇာထဲမှာသိမ်းထားတာကုိုပြောတာပါ။ ဖရက်ရှ် မဟုတ်ဘူးလို့ ။ ချဉ်ပေါင်လည်း ရေခဲရုိုက်ဘဲ။ လုံးပြီး ဖရီဇာထဲထဲ့ထားရတာ။(အရသာကတော့ ဖရက်ရ်ှနဲ့ တူတူဘဲ။)
၆. ချက်ပါ။ ချက်ပါ။ အိုအို အုန်းထမင်းပါ။
ရ.ကုိုယ်ချက်တဲ့ အုန်းနုို့ ဘူးက တော့ 400ml ဆုိုတော့ ၄၀၀ စီစီ လို့ ယူရမှာပေါ့။ (အွန်လိုင်းကပြန်ကြည့်ထားတာ)
၈. သိနေတယ်လေ။ ဘူးဆုိုရင် နုို့ ဆီဘူးဘဲမြင်မယ်ဆုိုတာ( မြန်မာပြည်ကလာကြသည်လေ။)
၉. u are also cool..kom.
၁၀. ဒါကျကုိုယ်နဲ့ တူတယ်။ မဟုတ်တဲ့နေရာဆုို စိတ်ကြီးတယ်။ အဟဲ
၁၁. ပူတင်းလုပ်တော့ တင်ပေးမယ်နော်။ (သိတဲ့အတိုင်းလာမည်ကြာမည်)
ဗိုက်ဆာသွားပြီလား။း)ပုံနဲ့ ဗုိုက်မပြည့်တော့ ခက်သားနော်။ flan လုပ်နည်းလေးတင်ပေးမယ်နော်။ ခဏစောင့်။
တင်ပေးမယ်နော်။ ခဏစောင့်။ ဒို့ လည်း ဖြစ်သွားလို့ ဝမ်းသာနေတာ။ အဲဒါလုပ်တဲ့ တီဗီရှုိုးတွေကြည့်ရင် ပန်းကန်ထဲထဲ့တုိုင်း သူတို့ တွေက ပုံမပျက်ထွက်လာရင် ပျော်တဲ့ပုံတွေ ပြတော့လေ။
အလည်လာလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ပျောက်နေလို့ နေမှကောင်းရဲ့ လားလို့ သတိရနေမိတာ။
စားရတော့မယ် မုိုးငွေ့ ရေ။ မစ်စ်ကွန် ကတော့ ကြိမ်းဝါးနေပြီ။း))
တကယ်တော့ သရက်ချဉ်လေးနဲ့ဆုိုဘက်ပေါ့။ သရက်သီးစိမ်းတွေကလည်း မချဉ်ရတဲ့ကြားထဲ ပျော့နေတော့ သခွားသီးသုပ်လိုက်တာပါ။ချီးမွမ်းစကားအတွက်ကျေးဇူးပါ။
သူသိပ်စိမ်းကားနော်။ ဘယ်မှာမှ မမန့် ရလို့ မြတ်ကြည်လေးစီမှာ ရောရေးခဲ့တယ်။း) စိတ်လိုမှ ဆုိုးတဲ့လက်သည်းတွေ မအားရတဲ့ကြားထဲ ခုဖျက်လိုက်ဆုိုးလိုက်နဲ့ အိပ်ချိန်တွေ ပိုလျော့ကုန်ပြီရှင့်။ သိရဲ့ လား။
လာပို့ ပေးမယ်။ ဟောရောက်ပြီ။ နွှေးပြီးစားလိုက်နော်။
ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေဘဲ ဘေဘီရယ်။ တခါတခါများဆုို ချက်ထားတဲ့ဟင်းအမယ်တွေတောင်တူနေလို့ ကိုယ်လည်း စိတ်ချင်းများဆက်နေသလားလို့ တွေးမိသေး။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 4, 2011 at 10:26 PM
အုန်းသီးတစ်လုံးရှိတယ်... အုန်းထမင်းချက်စားမယ် ဒန်တန့်တန့်
သူများလို အုန်းနို့ဘူးနဲ့ ဟုတ်ဘူးဟေ့.. အုန်းသီးအစစ်နဲ့ချက်မှာ.. ဟားဟား မဆီမဆိုင် လာကြွားနေပါလို့..
ပူတင်းလုပ်နည်း တင်ပေးပါ တင်ပေးပါ.. တို့များလည်း လုပ်ချင်ပါတယ်.. မုန့်တွေဘာတွေ မလုပ်တတ်တာမို့ နည်းလိုချင်ပါတယ်.. တင်ပေးနော်။
သခွားသီးသုပ်ထားတာလည်း မိုက်တယ်.. ကြည့်တာနဲ့ စားချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေတယ်.. ရှယ်ဘဲ..
Iora November 4, 2011 at 10:45 PM
အုန်းသီးနဲ့ ဆုိုပိုကောင်းတာပေါ့။ ပြောမဲ့သာပြောတာ အုန်းသီးခြစ်ညှစ်ပြီး ချက်စားရမယ်ဆုိုရင်ချက်ဖြစ်တော့မှာကိုမဟုတ်ဘူး။ (ပျင်းချက်)။
တင်ပေးမယ် တင်ပေးမယ်။ (ဘယ်တော့လဲတော့မေးနဲ့ )
သခွားသီးသုပ်ကမိုက်ဆုို သုပ်တဲ့သူက လူမိုက်ကုိုး ချောရဲ့။
san htun November 5, 2011 at 6:11 PM
ပူတင်းလုပ်နည်း တင်ပါဦးနော်..အုန်းထမင်းတွေ ပိုနေရင် အိုင်အိုဝါဖက်ကို ပါဆယ်ပို့ လိုက်ပါဗျို့ ... :P
Iora November 5, 2011 at 10:54 PM
Fedex နဲ့ ပို့ လိုက်ပြီ။း)
မီးမီးငယ် November 6, 2011 at 10:31 AM
Iora November 6, 2011 at 1:04 PM
ဟုတ်တယ်။ ကြုံနေမှ တော့ တခါတည်းသာသုံးဆောင်သွားပါတော့။း)
ပူတင်းလုပ်ပုံကလွယ်တော့ တူမယ်နဲ့ တူတယ်။
mstint November 6, 2011 at 6:19 PM
စာမဖတ်ခင် သင်္ဘောသီးအခွံထင်နေတာ သခွားသီးအခွံလား အိုင်အိုရာရေ။ တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူး သူ့ခွက်လေးထဲသူပြန်ထည့်ထားတာ ကြည့်လို့ဆန်းတယ်း)။ အုန်းထမင်းနဲ့ သခွားချဉ်စပ်သုပ်ကလိုက်ဖက်တယ်။ ဟင်းတွေလည်းရှယ်ပါလား။ ဒီမနက် အစားအသောက်တွေနဲ့ချည်းတိုးနေတယ်း) ဗိုက်ဆာလာပြီ။
Iora November 7, 2011 at 12:12 AM
စိတ်ဓါတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါရစေရှင်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။
T T Sweet November 7, 2011 at 5:10 PM
ဟင် သူကလဲ အုန်းထမင်းတဲ့။
ဟိုနေ့ကကျန်တဲ့ အုန်းထမင်း ရေခဲသေတ္တာထဲကထုတ်နွှေး၊ ချဉ်ပေါင်မျှစ်ကြော်နဲ့ ပြန်စားလိုက်ဦးမယ်ကွ ငှဲငှဲ။
ကောင်းမွန်ဝင်း November 7, 2011 at 7:58 PM
အဖြစ်က အဲလို အိုင်အိုရာရေ..........
Iora November 7, 2011 at 10:13 PM
အုန်းထမင်းအစားကောင်းလို့ ဒီမှာ အပူတွေကန်နေပြီ။ သတိထားပြီးအုပ်ပေတော့နော်။ ငှဲ..ငှဲ
အဲဒီကော်မန့် တွေကဘာဖြစ်နေမှန်းလဲသိပါဘူ။ ကုိုယ်လည်း သူများတွေကို ပေးလိုက်ရတာ ၂ခါပြန်၃ခါပြန်။
ကောင်း..ပို့ အသစ်မတက်တာကြာပြီမို့ နေမှကောင်းရဲ့ လားလို့ သွားကြည့်သေးတယ်။ ခုလောက်ဆုိုရင်တော့ အုန်းထမင်းနဲ့ လွှေးပြီးလောက်ရောပေါ့။
Vista November 7, 2011 at 10:42 PM
အကုန်စားသွားတယ် ပူတင်းလုပ်နည်း တင်ပါ အဲလို ပူတင်းတွေကြိုက်တယ် .သခွားသီးသုပ်လည်းကြိုက်....
Iora November 8, 2011 at 10:27 AM
စားစား အားမနာနဲ့ စား။း)
QuTe November 11, 2011 at 3:03 AM
ပူတင်း အရမ်းကြိုက်တယ်
ကြည့်နေရင်း ဂလု ဂလု နဲ့ တံတွေးမြိုချနေရတယ် ဟီးဟီး
Iora November 11, 2011 at 1:01 PM
ပူတင်းကုိုအချိုသိပ်မကြိုက်တဲ့ဒို့ လည်းကြိုက်တယ်သိလား။ ငယ်ငယ်ကခဏခဏစားရလို့ လားတော့မသိဘူး။
mgphyu October 11, 2013 at 11:46 PM
Excellent Burmese Foods which I like the most of all of them.I forward this link and requested my grilfriend to make some for me.But she said to me that go to buy from Burma Super Star restaurent from San Francisco.I wish I havealady like you guy.Thanks so lot......
Iora October 23, 2013 at 8:59 PM
Your girlfriend is so practical and you don't have to wait for somebody willing to cook for you. But you will have to wait out side.
The best way is that just cook by yourself/ourselves otherwise we're gonna end up with "pizza" everyday. :)